Die Hard Mission in Myanmar | J-Myanmar
Hollywood မှ Die Hard နှင့် Mission impossible ၂​ခု​ပေါင်း​၍ Mission Die Hard ရိုက်​ရန်​စီစဉ်​လိုက်​ကြ​သည်…
ထူး​ထူးခြား​ခြား နေရာ​ကို မြန်မာ​ကို ရွေး​လိုက်​ကြ​သည်။
Bruce Willis,Tom Cruise နှင့် Michelle Yoeh အပါအဝင် သရုပ်ဆောင်​များ​စွာ​နှင့် အားဖြည့်​ထား​ကြ​သည်။
ဇာတ်​လမ်း​အစ​တွင် ချောင်းသာ​တွင် တွမ်​ခရု နား​နေ​သည်။ ထို​စဉ် စခန်း​မှ mission အတွက် video message ဝင်​လာ​သည်။ တွမ်​ခရု ဖွင့်​ဖတ်​သည် … အဝိုင်း​လည်​နေ​သည်… your new mission is … ဆို​တာ​ပဲ တွေ့​လိုက်​ရ​သည်…။ SIM card ကို ပြောင်း​ထဲ့​ပြီး ပြန်​ချိတ်​သည်…အဝိုင်း​လည်​သည် …. နောက်​တစ်​ကဒ် ပြောင်း​ချိတ်​သည်… အဝိုင်း​လည်​နေ​သည်…။ စိတ်​မ​ရှည်​သ​ဖြင့် hotel wifi နဲ့ သွား​ကြည့်​သည်…. မ​ထူးခြား။
ဒါ​နဲ့​ပဲ အရေးကြီး mission ဆို​တာ သိ​သ​ဖြင့် Bruce willis ကို ရန်ကုန်​သို့ video ဖိုင်​ယူလာ​ရန် ချိန်း​လိုက်​သည်။
bruce က iPad ဖြင့် ရန်ကုန်​လာ​သည်။ လေ​ဆိပ်​တွင် custom နှင့် တိုး​သည်။ အိုင်​ပတ် သိမ်း​လိုက်​သ​ဖြင့် တိုင်​ပတ်​ကုန်သည်။ laptop ထဲ​ရှိ backup ဖိုင်​ကို ကြည့်​ရာ laptop တက်မ​လာ​သ​ဖြင့် ပြင်​ရန် ပန်းဆိုး​တန်း​နား​ရှိ ဆိုင်​တစ်​ဆိုင် အပ်​လိုက်​ရာ ဆိုင်​က ကိုယ်တော်​တွေ​က ထုံးစံ​အတိုင်း format ချ​ပြီး window အသစ် ပြန်​တင်​လိုက်​သ​ဖြင့် နား​ကား​ကုန်သည်။
နောက်ဆုံး မီ​ရှဲ​ယို​က mission ကို အသေး​စိတ် အလွတ်​ကျက်​လာ​ပြီး တရုတ်​နယ်စပ်​မှ ကား​ကို အမြန်​မောင်း​ချ​လာ​သည်။ မြို့​အဝင်​တွင် ပြိုင်​ကား​ကို sticker ကပ် ထား​သည်​ဟု​ဆို​တာ ရစ်​နေ​သ​ဖြင့် မောင်း​ပြေး​သည်။ လမ်း​က ချိုင့်​တွေ​နဲ့ တွေ့ ပြီး ပြိုင်​ကား စ​မုံ​တုံး​သွား​သည်။ ဒါ​နဲ့​ပဲ taxi ကို တား​ပြီး ဝင်​ထိုင်​လိုက်​ရာ မီ​တာ​မဟုတ်​သ​ဖြင့် taxi သမား​နှင့် စကား​များ​ပြီး ကန်​ထုတ်​ခံ​ရ​သည်။ အဲ့​နောက် smart card အားကိုး​နဲ့ bus ကား တက်​စီး​ပြန်​ရာ​လဲ bus ကား​တွေ​က smart ကဒ်​နဲ့ က စက်​ပျက်​နေ​တယ်​ပြော​သ​ဖြင့် အကြွေ​လည်း မ​ရှိ​သော​ကြောင့် ဒေါ်လာ​၁​၀​ဝ​တန်​ကို စိတ်တို​တို​နဲ့ ပေး​ရင်း ဆုံ​မှတ် ရောက်​အောင် လာ​ခဲ့​သည်။
၃​ယောက်​ဆုံ​တော့ မီ​ရှဲ​ယို​က mission ကို​ပြော​ပြ​သည်။ လူဆိုး​တွေ ဒီ​ကို​လာ​ပြီး ဒုက္ခ​ပေး​မည်။ hacker တွေ​လဲ ပါလာ​သည်။ ဒါ​ကို သိ​တော့ ဒီ​က ဂျော​တွေ​ကို သိ​ထား​သော တွမ်​ခရု​က ရီ​ပြီး ဒီ​လောက်​တော့ အေး​ဆေး​ပါ … လက်ပိုက်​နေ​ရုံ​ပဲ​ဟု​ပြော​သည်။
လူဆိုး​တွေ ရန်ကုန် ရောက်လာ​သည်။ die hard4တုန်း​က​လို hacker အုပ်စု​က fire sale ကို စ​ရန်​ပြင်​သည်။ လျပ်​စစ် ဓာတ်​အား​ကို ဖြတ်​တောက်​ဖို့ hack ရန်​ပြင်​သည်… မ​ရ …။ တစ်​လမ်း​ဝင် တစ်​လမ်း​ထွက် မိန်း​လိုက်​ချ​မှ ရ​မည်​ဆို​သ​ဖြင့် လူ​မ​သိ​သူမ​သိ မိန်း​တွေ လိုက်​ချ​သည်။ လမ်း​တွေ မီး​ပျက်​ကုန်သည်။ သို့သော် ဘယ်​သူ​မှ အံ့ဩ​ဟန်​မ​ပြ… အသွားအလာ မ​ပျက်… စကားပြော​မ​ပျက် …။ လူဆိုး​တွေ ဘယ်​လို​မှ စဉ်းစား​၍​မ​ရ ..။ မီး​ပျက်​လို့ ၁​မိ​နစ်​ပင် မ​ကြာ မီးစက်​သံတွေ အလျို​လျို ပေါ်လာ​ပြီး မီး​များ ဟို​တစ်​စ သည်​တစ်​စ ပြန်​လင်း​လာ​သည်။ တစ်​မြို့​လုံး စ​ကေး​နှင့် လျပ်​စစ် backup plan တွေ မြင်​လိုက်​ရ​သည့်​အခါ လူဆိုး​တွေ လက်ဖျားခါ​သွား​သည်။
ဒါ​နဲ့ နောက်​တစ်​ဆင့် မီး​ပွိုင့်​တွေ​ကို hack ပြီး traffic တွေ က​မောက်​က​မ​ဖြစ်​အောင် ကြံ​သည်။ hacker က မီး​ပွိုင့် control center ရှာသည်။ မ​တွေ့။ မီး​ပွိုင့်​နား သွား​ပြီး access point လို​မျိုး​ဟာ​တွေ ရှာသည် မ​ရှိ။ ဒါ​နဲ့​ပဲ စိတ်​မ​ရှည်​ပဲ မီး​ပွိုင့်​ကို ပေး​သည့် လျပ်​စစ်​ကြိုး​ကို ကပ်​ကြေး​နှင့် သွား​ညှပ်​သည်။ မီး​ပွိုင့် ပျက်​သွား​သည်။ သူ ပျော်​သွား​သည် ကား​တွေ ပြသ​နာ တတ်​တော့​မယ်​ပေါ့။ ဒါ​ပေ​မယ့် သူ့​အပြုံး​က ၁​မိ​နစ်​ပင် မ​ခံ။ ကား​တွေ​က အေး​ဆေး⁠ဆေး​နှင့် လက်​ကလေး ပြ​လိုက်… လက်ညှိုး​လေး တစ်​ချောင်း​ထောင်​လိုက်… မီးတောက်​လိုက်… ဟွန်း​တီး​လိုက်… အစ်ကို​ရေ တစ်​စီး​လောက် လို့ ပြော​လိုက်​နှင့် ဟို​တိုး ဒီ​တိုး​နှင့် ဆက်​သွား​နေ​ကြ​သည်၊ … သူ့​ဟာ​နှင့်​သူ ဟုတ်​နေ​တာ​ပဲ။ လူဆိုး​တွေ မျက်လုံး ထပ်​ပြူး​သွား​သည်။ တစ်​မြို့​လုံး လူ​တွေ​ကို ဒီ​လို emergency training တွေ ဘယ်​တုန်း​က​များ ပေး​ထား​လဲ​ဟု စဉ်းစား​မ​ရ ဖြစ်​သွား​သည်။
သည်​တော့ ဒါ​တွေ လုပ်​မ​ရ​ရင် stock market တွေ​ကို hack မယ်​ကွာ.. စ​တော့​ဈေး​တွေ က​မောက်​က​မ​ဖြစ်​ပြီး လူ​တွေ ဆူ​အောင်​လုပ်​မယ်​ဟု​ဆို​တာ ကြိုးစား​သည်…။ online တွင် stock market မ​တွေ့ …။ သူ​တို့​များ မှား​နေ​လား​ဟု google တွင် online market ဟို​ဆို​တာ ရှာ​တော့ အကျီ​လေး​တွေ ပိုက်ဆံ​အိတ် copy လေး​တွေ ရောင်း​သော online shopping တွေ​သာ ရှာ​တွေ့​သည်။
ဒါ​နဲ့​ပဲ fire sale နောက်​တစ်​ဆင့် ဖြစ်​သည့် အဆောက်အအုံ​တွေ​ရှိ emergency alarm တွေ မြည်​အောင် လုပ်​မည်​ဟု ကြိုးစား​သည်။ ထုံးစံ​အတိုင်း online မှ လုပ်​မ​ရ​သည့်​အတွက် နီးစပ်​ရာ အဆောက်အအုံ​မှ fire alarm ကို manual ဖွင့်​ရန်​ကြိုးစား​သည်။ မှန်​ခွဲ​၍ နှိပ်​ပါ​ဆို​သော ခလုတ်​ကို နှိပ်ရာ ခ​လုပ်​က သံ​ကြေး​ကပ်​နေ​သည်။ မ​ရ​မက ခု​ထောင်း​နှိပ်ရာ ကျိကျိ ၂​ချက်​သာ မြည်​ပြီး ပျက်​သွား​သည်။ အပေါ်​က emergency ရေပန်း​ကို မီးခြစ်​နှင့် တက်​ရှို့​ရာ zippo ဆီ​သာ ကုန်​သွားည် ရေ​က အိမ်​မြောင်​သေး​ပေါက်​သ​လောက်​တောင် ကျ​မ​လာ။ တော်တော် လေ​သွား​ကြ​သည်။
ဒါ​နဲ့ စိတ်ပျက်​ပျက်​ဖြင့် ငါး​မ​ရ ရေချိုး​ပြန် ပုံစံ​ဖြင့် ATM စက်​ကို hack ပြီး ပိုက်ဆံ ထုတ်​ရန်​ကြိုးစား​သည်။ ATM စက်​တစ်​ခု​ဆီ​သွား​သည်၊ ပျက်​နေ​သည်။ နောက်​တစ်​ခု​ဆီ​သွား​သည် စက်​မ​ဖွင့်​ထား။ နောက်​တစ်​ခု​က စက်​ဖွင့်​ထား​တော့ ဝမ်းသာ​အားရ​နဲ့ သူ​တို့ VISA ကဒ်​ကြီး ထဲ့​ပြီး ကြိုးစား​သည်။ connection မ​တက်​သ​ဖြင့် PIN ရိုက်​၍​မ​ရ …။ ၃ ၄ ၅ ခါ​စမ်း​တော့ စက်​က ကြောင်​ပြီး သူ့ VISA ပါ ထုတ်​မ​ပေး​တော့။ သွား​ပြီး .. သူ့ VISA ကဒ်​ပါ အစစ် ပါသွား​သည်။
စိတ်ညစ်​ညစ်​နဲ့ သူ​တို့ ကား​ဆီ​ပြန်လာ​တော့ ကား​က လမ်း​ဘေး ရပ်​ထား​သ​ဖြင့် က​ရိန်း​က မ​သွား​သည်။ လိုက်​မေး​တော့​လဲ ဘယ်​သူ့ ခွေး​အဖေခေါ်​ရ​မ​သိ ဖြစ်​နေ​သည်။ ဒါ​နဲ့ စိတ်​တွေ အကြီး​ကြီး လေ​ပြီး လမ်းမ​ဘေး​က ခြေ​ဦး​တည့်​ရာ လျောက်​သွား​ကြ​ရာ bus ကားပေါ်​မှ ကွမ်း​တံတွေး လှမ်း​ထွေးခံ​ရ​သည်၊ လမ်း​ဘေး​ဈေး​ဗန်း တက်​နင်း​မိ​သ​ဖြင့် မ​ရှိ⁠ရှိ​တဲ့ ပိုက်ဆံ​ဖြင့် လျော်​ရ​သည်၊ လမ်းမ​ဘေး ေ့​ရှ​နောက် မ​ကြည့် လျောက်​သ​ဖြင့် ဆိုက်​ကား​သမား လှမ်း​ဆဲ​တာ ခံ​ရ​သည်။
စိတ်ပျက်​လက်ပျက်​ဖြင့် အုပ်စု​လိုက် ၁​၉​လမ်း သွား​သောက်​ကြ​တော့ ဘီ​ယာ​ဆိုင်​က bill ကို ၃​ဆ​လောက် ပေါင်း​ထဲ့​ပြီး ဂျင်း​ထဲ့​လိုက်​သည်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်​တိုင်း​ပြည်​ကို​ပဲ ပြန်​ပါ​တော့​မည်​ဟု စိတ်​ဆုံးဖြတ်​ကာ လေ​ဆိပ် သွား​တော့ ကား​ပိတ်​သ​ဖြင့် နေ့​ဝက်​လောက် ချွေး​ဒီးဒီး​ကျအောင် taxi စီး​လိုက်​ရ​သည်။ ဟို​ရောက်​တော့ flight delay ဆို​သ​ဖြင့် ၉​နာရီ​လောက် ထပ်​စောင့်​လိုက်​ရ​သည်။ မ​ပြန်​ခင်​တော့ ကောက်ချက်​ချ​လိုက်​သည် …. ” ငါ​တို့ ကမ္ဘာ​လှည့်​ပြီး လုပ်​စား​လာ​တာ ကြာ​ပြီ။ ဒီ​လို​မျိုး ဘယ်​လို စမ်း⁠စမ်း​ခံ​နိုင်​တဲ့ နေရာ​မျိုး မ​တွေ့​သေး​ဘူး။ တော်တော် တော်​တဲ့ သူ​တွေ။ ငါ​တို့​တောင် စ​မုံ​တုံး​တော့​မ​လို့ ။ သူ​တို့​ကတော့ ဟန်​တောင် မ​ပျက်​ဘူး “… တဲ့။
ဒီ​အဖြစ်အပျက်​ကို နောက်​က အစ​အဆုံး နောက်​ယောက်​ခံ​ကြည့်​နေ​သူ​တွေ​ကတော့ … တွမ်​ခရု​က ဂျာနယ်​လက်​ပွေ့​သမား​အဖြစ်၊ ဘ​ရုစ်​က လေ​ဆိပ်​က အထမ်းသမား အဖြစ်၊ မီ​ရှဲ​ယို​က ၁​၉​လမ်း​မှ beer promotion သူ​လေး အဖြစ်​နှင့် ဖြစ်​သည်။ ဂျာနယ်​သမား​ယောင်​ဆောင်​ပြီး ကားပေါ်​က နေ ကွမ်း​တံတွေး​ဖြင့် လှမ်း​ထွေး​လိုက်​ရ​သည်၊ beer ဆိုင်​တွင် bill ရှင်း​ရာ ဂျင်း​ထဲ့​လိုက်​ရ​သည်၊ လေ​ဆိပ်​တွင် ပစ္စည်း လု​သယ်​ပြီး ရသ​လောက် တောင်း​လိုက်​ရ​သည်​ဟု ပြန်ပြော​ကာ သူ​တို့ ၃​ယောက် ရီ​နေ​ကြ​သည်။ တွမ်​ခရု​က ပြော​သည် … ” တွေ့​တယ်​မ​လား ၊ အဲ့​လို ကောင်​တွေ​လောက်​ကို ဒီ​မှာ စကား​ထဲ​တောင် ထဲ့​ပြော​ဖို့ မ​လို​ဘူး”
သည်လို​နှင့် Mission Die Hard ဇာတ်​လမ်း​ကြီး​ကို ခမ်​ခမ်းနား​နား ရိုက်​ကူး​ပြီး တစ်​နိုင်ငံ​လုံး ရှိ ရုပ်​ရှင်​ရုံ​များ​တွင် ပြိုင်​တူ ပြသ​သည်။ ရှယ်​ကား​မ​လို့ ၂ လ ၃​လ​လောက် ပြ​မည်​ဟု ကြေငြာ​သည်။ သို့သော် ပြ​ပြီး ၃​ရက်​အကြာ​တွင် မြို့​ထဲ​တွင် ခိုး​ကူး​ခွေ​များ ထွက်​လာ​သ​ဖြင့် အားလုံး ဝိုင်း​အားပေး​ကြ​ရာ Hollywood မှာ ခွက်⁠ခွက်​လန်​အောင် ရှုံး​လေ​သ​တည်း ….
Next post သင်​မ​သိ​သေး​တဲ့ Titanic သင်္ဘော​အကြောင်း
Previous post ကမ္ဘာကျော် လက်​ဝှေ့​သမား မန်​နီ​ပတ်​ကီ​အောင်း